Real Madrid oo u dhaqaaqday Paulo Dybala | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Real Madrid oo u dhaqaaqday Paulo Dybala
Real Madrid oo u dhaqaaqday Paulo Dybala
Himilo FM –Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqayso weeraryahanka Juventus Paulo Dybala xilli ciyaareedkan marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Dybala ayaa dhaliyay 75 gool 168 kulan oo uu soo muuqday tan iyo markii uu Juve kaga soo biiray naadiga Palermo xilli ciyaareedkii 2015.
Xilli ciyaareedkan, weeraryahanka reer Argentina ayaa shabaqa ku hubsaday toddobo gool 28 kulan oo uu ciyaaray dhammaan tartamada oo ay ku jirto shan gool oo uu ka dhaliyay heerka guruubyada tartanka Champions League.
Barbaarkan ayaa keliya shabaqa ku hubsaday laba gool horyaalka Serie A fasal ciyaareedkan, taasi oo u muuqata mid isaga ku adag, waxaana lagu soo waramayaa in ninka kasoo jeeda koonfurta Ameerika uusan salfadhiya ku laheyn Turin.
Manchester City, Bayern Munich and Paris Saint-Germain ayaa ah kuwa lala xiriirinayo Dybala, laakiin AS ayaa ku warantay in Madrid ay u dhaqaaqi doonto doonitaanka 25 jirkan inta lagu guda jiro xagaagan.
Dybala ayaa qiimahiisu lagu sheegaa £100m, lacibkan ayaana keydka ku soo billowday labadii kulan ee ugu danbeysay Serie A oo ay ciyaartay Juventus.
Previous: Oggow sababta wariye Mareykan ah uusan u dhaqin gacmihiisa!
Next: Indonesia: Booliis mas ku cabsi geliyay maxbuus si uu qiraal u sameeyo